Diyaarad sida kumanaan dhalo oo khamri ah oo lagu qabtay garoonka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Diyaarad sida kumanaan dhalo oo khamri ah oo lagu qabtay garoonka Muqdisho
Mareeg.com: Diyaarad siday khamri farabadan oo lagu qiyaasay ilaa 25 kun oo dhallo, ayaa galabta lagu qabtay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen ciidamada amanka dalka Soomaaliya.
Lama sheegin wax rakaab ah oo la socday diyaaraddan siday khamriga faraha badan, waxaana Laamaha ammaanka Dowladda Somaliya ee ka hawlgala Garoonka Aadan Cadde, bilaabeen baaritaan ku saabsan sidii lagu ogaan lahaa qaabka diyaaradaas oo la sheegay in laga leeyahay Kenya ay khamriga ku keentay Muqdisho iyo dadka iska leh khamriga.
Taliyaha Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Somaliya General C/laahi Gaafow Maxamuud, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Maaliyadda C/laahi Maxamed Nuur, Saraakiisha Booliska iyo Nabad Suggida Gobolka Banaadir, ayaa tegay Garoonka Aadan Cadde.
Waxaa soo baxaaya warar sheegaaya in diyaaraddu ay khamriga u siday Shirkadda SKA, oo xilligaan gacanta ku heysa qaybta shidaalka ee Garoonka Aadan Cadde, horeyna u maamuli jirtay Garoonka oo idil.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir, ayaa bishii October ee sanadkii 2014 sheegay in dukaamo ganacsi oo ku yaala Garoonka Aadan Cadde lagu dhex iibiyo khamriga.
Lama oga waxa dowladda Soomaaliya ka yeeli doonto khamrigaan faraha badan ee ay siday diyaaradda lagu qabtay garoonka Aadan Cadde.